Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: နယ်ချဲ့ရန်ကို တမျိုးသားလုံးအင်အားဖြင့် တွန်းလှန်ကြ
နယ်ချဲ့ရန်ကို တမျိုးသားလုံးအင်အားဖြင့် တွန်းလှန်ကြ
ဘင်္ဂါလီကုလားက မြန်မာပြည်ကို အကြမ်းဖက်ပြီးကျူးကျော်တယ်။ တရုတ်က မြန်မာပြည်ကို စီးပွားရေးအသွင်ဆောင်ပြီး အနုနည်းနဲ့ နယ်ချဲ့တယ်။
တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘင်္ဂါလီကုလားပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ကိုကျူးကျော်နယ်ချဲ့လာရင် တမျိုးသားလုံးရဲ့အင်အားနဲ့ တွန်းလှန်ကြမယ်။
ဘင်္ဂါလီကုလားက ရခိုင်ကိုထိရင် မြန်မာတပြည်လုံးကို စော်ကားတာနဲ့တူတူပဲ။
တရုတ်က ကချင်ကိုတိုက်ရင် မြန်မာတပြည်လုံးကို သိမ်းပိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်သားတွေကို ရန်စစော်ကားမှုသာ ဖြစ်တယ်။
မြန်မာတပြည်လုံးကို ကျူးကျော်နယ်ချဲ့မှုသာ ဖြစ်တယ်။
ဒါဟာ ဘာသာရေးပြဿနာ မဟုတ်သလို လူမျိုးရေးပဋိပက္ခလည်း မဟုတ်ဘူး။
ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဟာ မြန်မာတပြည်လုံးကို စော်ကားခြင်းဖြစ်တယ်။
အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေဟာ ကန္တာရထဲက ကုလားအုတ်လိုပဲ မြန်မာပြည်မှာဆက်ပြီးထားရင်လည်း အကျိုးယုတ်စေဖို့သာ ဖြစ်လာမယ်။ ကျွေးတဲ့လက်ကို ပြန်ကိုက်တဲ့ခွေးမျိုးတွေသာ ဖြစ်တယ်။
ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားကိစ္စဟာလည်း အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ အာဏာလောဘကြီးမှု၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းများရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ပြည်ပမီဒီယာများရဲ့ အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်း သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့် ယခုလောက်ထိ ကြီးကျယ်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။
လက်ရှိအစိုးရဟာ ဘင်္ဂါလီကုလားကိစ္စကို ယခင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်သည် ဆိုတာထက်ပိုပြီး ဦးဆောင်ဖြေရှင်းပေးရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီး နယ်ချဲ့လာသူတွေကို တင်းကျပ်စွာ တားဆီးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးဟာလည်း ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်သင့်တယ်။
ဘင်္ဂါလီကုလားအကြမ်းဖက်မှုဟာ ရခိုင်အရေးမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ အရေးဖြစ်တယ်။
ပြည်သူရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့ အကြမ်းဖက်လူအုပ် ကို ပစ်စရာရှိရင်ပစ်ပါ၊
ပြည်သူ့ အသက်အိုးအိမ်ကို ရန်ပြုလာသူတွေကို သတိပေးလို့ မှ နောက်မဆုတ်ရင် ပစ်စရာရှိရင်ပစ်ပါ၊
ဘူးသီးတောင် နဲ့ မောင်းတောမှာ ဒီရက်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား လူနည်းစုကော လူများစု ကော လူအုပ်လူစု နဲ့အပြစ်မဲ့ လုပ်သားပြည်သူ တွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ကို ရန်ပြု နေကြပါတယ်၊
နိုင်ငံတော် က လူနည်းစုနဲ့ လူများစုတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်၊
အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မုဒိန်းကျင့်သတ်တဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေ နဲ့ကားပေါ်က မွတ်စလင်ဘာသာဝင် ၁၀ ဦးကို သတ်ခဲ့တဲ့ လူအုပ်စု တို့ ဟာ လူသတ်မှု ကို ကျုးလွန်ခဲ့ တဲ့ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေဖြစ်တယ်၊ သူတို့ ရဲ့ ရာဇ၀တ်မှုအတွက် နိုင်ငံတော်မှာ တရား ဥပဒေဆိုတာတွေ ရှိလို့တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းက နေ တရားစီ ရင် ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊
အခုလို တရားဥပဒေကို မထီမဲ့ မြင်ပြုပြီး လူအုပ်လူစု နဲ့ ဥပဒေဘောင်အပြင် ကနေ အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေကြ တဲ့ ဘာသာစုံယုံကြည်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်ကို ထိပါးစော်ကား လာခြင်း ဟာ နိုင်ငံတော်ကို ပါ စော်ကားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ရဲအင်အားကို အသုံးပြု လို့ မှ အထိရောက်ခဲ့ ရင် စစ်တပ်အင်အားကို အမြန်ဆုံး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်၊
ဒီနေရာမှာ စစ်တပ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်လူအုပ်ကို နံမည်ပျက်မှာ စိုးရိမ်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား မဟန့် တားပဲ မနေသင့်ပါဘူး၊
လက်ရှိ တပ်မတော် ဟာ ပြည်သူတို့ ရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်ကြောင်း ပြသ ဖို့ အချိန်ကျနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်၊
အာဏာရှင်တစ်စု ရဲ့ သြဇာတည်မြဲ ဖို့အပြစ်မဲ့လူအုပ်ကို ပစ်တဲ့ တပ်မတော် မဟုတ်တော့ ပဲ ပြည်သူ တွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့အကြမ်းဖက်လူအုပ်ကို ပစ်တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်ကြောင်းပြဖို့ အခု အခါမှာ အသင့်လျှော်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်၊
လိုအပ်ရင် ပစ်စရာရှိတာပစ်ပါ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးတို့ ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် လုပ်သင့်တာအမြန်သာလုပ်ပါ၊
Zato Ichi (antidictator@gmail.com)
စစ်အာဏာရှင်များကို ဆန့်ကျင်သည့် သဘောထားတခုတည်းကိုသာ တင်ဆက်သော၊ ဒီမိုလိုလား အတိုက်အခံ များ၏ မတူကွဲပြားသည့် အမြင်များကို မတင်ဆက်သော တခြားဆိုဒ်များကဲ့သို့ - ဟစ်တိုင် မကျင့်သုံးပါကြောင်း သိစေလိုပါသည်။
လူယဉ်ကျေး စာမူရှင်များကို အစဉ်လေးစားလျှက်--
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 21:00
Labels: သတင်း, သူတို့အမြင်
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: နယ်ချဲ့ရန်ကို တမျိုးသားလုံးအင်အားဖြင့် တွန်းလှန်ကြ . All Rights Reserved